AKHRI WARBIXIN: Waa imise tirada ciidamada AMISOM ee looga dilay gudaha Soomaaliya? | HalQaran.com
Home Wararka Maanta AKHRI WARBIXIN: Waa imise tirada ciidamada AMISOM ee looga dilay gudaha Soomaaliya?
AKHRI WARBIXIN: Waa imise tirada ciidamada AMISOM ee looga dilay gudaha Soomaaliya?
Muqdisho (Halqaran.com) – Warbixin la soo saaray ayaa lagu sheegay tirada Ciidamada AMISOM ee looga dilay Soomaaliya tan iyo markii Sanadkii 2007 ay galeen Ciidamada Midowga Afrika Magaalada Muqdisho.
Warbixintaan ayaa waxaa soo saaray Barre Jaamacadeed oo lagu magacaabo Paul Williams, kaasi oo sheegay xogta la xiriirta Warbixinta inuu ka helay ilo kala duwan oo gaaraya illaa Shan xubnood, islamarkaana uu helay cadeymo muujinaayo magdhowga Ciidankaasi qoysaskooda la siiyay.
Paul Williams, ayaa warbixintiisa ku sheegay tirada Ciidamada Amisom Somaliya looga dilay inay gaarayaan illaa 1,800 Askari, hayeeshee waxaa uu warbixintiisa ku sheegay in tirada intaas aad uga badan tahay.
Darbiga Midowga Afrika ee Xaruntiisa ay tahay Magaalada Addis Ababa ayuu xogta qaar ka soo xigtay, halkaasi oo uu ka helay magacyada & Darajada Ciidamada lagu dilay Somaliya ee ka tirsan Midowga Afrika.
Warbixintan oo uu ku soo bandhigay Machadka caalamiga ah ee Nabadda oo uu fadhigiisu yahay magaalada New York ee dalka Mareykanka ayuu dowladaha Amisom ku jira ku eedeeyay in aysan khasaaraha askartooda soo gaarta la wadaagin Warbaahinta, kaliyana la qaato warbixinnada ay Al-shabaab ka sheegtaan taas oo uu sheegay in ay tahay siyaasad xun.
Paul Williams, ayaa warbixintiisa ku muujiyay in intii u dhaxeeysay 2007 ilaa December 2018 Askarta Amisom u diiwaangashan ee dhintay ay gaarayaan 1,884 Askari, iyada oo wixii ka dambeeya xilligaasna meelaha qaar aysan ahayn kuwo dhameystiran.
August 2009 ilaa September 2012,waaxaa geeriyootay 439 Askari,waxaana lagu ogaaday dukumiintigii magtooda lagu bixiyay oo muujinaya in askarigiiba laga bixiyay $50,000 oo doollarka Mareykanka ah.
AMISOM ayaanan inta badan la wadaagin Warbaahinta Khasaaraha kala duwan ee ka soo gaara dagaalka ay kula jiraan Shabaab, balse taasi bedelkeeda waxa ay sameeyaan inay qariyaan xogta la xiriirta Khasaaraha ka soo gaara dagaalka Shabaab.
Tirada ciidamada AMISOM ee Soomaaliya looga dilay